KMF/Cnoe : “Mametra ny datim-pifidianana ny Ceni raha tena mahaleo tena” | NewsMada
KMF/Cnoe : “Mametra ny datim-pifidianana ny Ceni raha tena mahaleo tena”
Efa mandeha izao ny tombontombana momba ny tetiandrom-pifidianana filohan’ny Repoblika, taona 2018. Mametra ny datim-pifidianana ny Ceni raha tena mahaleo tena, araka ny fijerin’ny KMF/Cnoe.
“Mametra ny tetiandrom-pifidianana ny Ceni, raha tena mahaleo tena marina”, hoy ny ny filoha nasionalin’ny KMF/Cnoe, Rabekijana Félix, raha nanontaniana ny amin’ny famaritana ny tetiandrom-pifidianana filohan’ny Repoblika.
Tokony hazava ao amin’ny lalàm-pifidianana anaovana fanatsarana amin’izao fotoana izao koa izay fahazoan’ny Ceni mamaritra ny tetiandrom-pifidianana izay. Miankina amin’ny vola enti-manana koa ny fifidianana. Nefa efa nahazo vola ho amin’izany ny Ceni.
Mamaritra mazava tsara ny lalàmpanorenana fa dimy taona ny fe-potoam-piasan’ny filohan’ny Repoblika. Tapitra amin’ny 25 janoary 2019 ny fe-potoam-piasan’ny filoha am-perinasa amin’izao.
Azo atao tsara ny manatanteraka fifidianana 60 andro alohan’io. Mbola tafiditra tsara ao amin’ny fe-potoana voafaritry ny lalàm-pifidianana amin’izao fotoana izao izay 60 andro mialoha izay.
Amin’izany, mila mahay manangona sy mikirakira ny voka-pifidianana ny Ceni. Mba hahazoana mamoaka ny voka-pifidianana hiatrehana ny fifidianana filohan’ny Repobika, fihodinana faharoa, amin’ny desambra 2018. Amin’izay, manana filohan’ny Repoblika vaovao i Madagasikara amin’ny janoary 2019.
Andrasana ny fanatsarana ny lalàm-pifidianana
Ny amin’ny fanatsarana ny lalàm-pifidianana eo anelanelan’izay, efa mikofokofoka sy miketrika izany ny Ceni amin’izao fotoana izao. Efa nisy atrikasa maromaro nanaovan’ny Ceni fakan-kevitra tamin’ireo mpisehatra amin’ny fifidianana, samy nanolotra soso-kevitra hanatsarana ny lalàm-pifidianana. Mba hanaraka ny toetrandro izany ary tsy hisy fifanoherana.
Andrasana ny hivoahan’izay fanatsarana ny lalàm-pifidianana izay. Raha mivoaka izay, ny takina: mila hajaina fa tsy dinganina ny voalazan’ny lalàmpanorenana hoe dimy taona ny fe-potoam-piasan’ny filohan’ny Repoblika, fa tsy tokony hihoatra an’izay. Miara-tapitra ny fe-potoam-piasan’ny filohan’ny Repoblika sy ny solombavambavahoaka.
Amin’izany rehetra izany, tsy misy resaka intsony ny amin’ny fifidianam-paritra? Tsy mahagaga raha tsy misy izay hoe fampandrosoana ifotony, indrindra izay fandraisan’ny vahoaka anjara amin’izany araka ny hetahetany.